WINDOWS ကို 10 - အားလုံးညွှန်ကြားချက် - ဆောင်းပါးများ - 2019
တပ်ဆင်ခြင်း, မွမ်းမံ, configuring, ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းကို - ဤစာမကျြနှာကို Windows 10 ရက်တွင်အားလုံးအရေးကြီးသောပစ္စည်းများပါဝင်သည်။ စာမျက်နှာအသစ်ကညွှန်ကြားချက်အဖြစ် updated ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျလက်စွဲလျက်, operating system ကို၏ယခင်ဗားရှင်းအပေါ်ဆောင်းပါးများကိုလိုအပ်လျှင်, သင်ကသူတို့ကိုကဒီမှာရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
သငျသညျ upgrade ချင်ပေမယ့်အချိန်မရှိဘူးဆိုပါက: ဇူလိုင်လ 29, 2016 တွင်အပြီးအခမဲ့အဆင့်မြှင့် Windows 10 ကိုရဖို့ဘယ်လို။
တစ်ဦး bootable USB flash drive ကိုသို့မဟုတ် disk ကိုဖြစ်စေလျက်, Windows 10 ကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်လုပ်နည်း
အဲဒီ ISO မူရင်း Windows 10 ကို download လုပ်ပါမှတရားဝင်ဥပဒေရေးရာလမ်းအဖြစ်ကဗီဒီယိုညွှန်ကြားချက် - တရားဝင် website ကနေ Windows 10 ကို download လုပ်ပါနည်း။
(90 နေ့ရက်ကာလအဘို့စမ်းသပ်ဗားရှင်းအခမဲ့) - Windows 10 ကိုလုပ်ငန်းက ISO ကို download လုပ်ပါနည်း။
စနစ်တပ်ဆင်ရန်တစ် bootable USB ကဖန်တီးသတင်းအချက်အလက် - bootable flash drive ကို Windows က 10 ဖြစ်ပါတယ်။
Mac OS X ကိုအပေါ် bootable flash drive ကို Windows က 10
Windows 10 ကို Boot တက် disk ကို - တပ်ဆင်ခြင်းများအတွက် bootable DVD ကိုအောင်ဘယ်လို။
installation, ပြန်လည် install ပြုလုပ်, update ကို
(ဒီအဘို့နှင့် disk ကိုထံမှ installation အတွက်) USB flash drive တစ်ခုနှင့်အတူကွန်ပျူတာသို့မဟုတ် laptop ကိုအပေါ် Windows 10 ကို install လုပ်ဖို့ဘယ်လိုပေါ်အသေးစိတ်ညွှန်ကြားချက်များနှင့်ဗီဒီယိုများ - တုတ်ကနေ Windows 10 ကို Installing ။
တစ်ဦးနဲ့ Mac ပေါ်မှာ Windows 10 ကို Installing
Update ကိုအောက်တိုဘာလ 2018 ကို Windows အောက်တိုဘာလ 1809 ခုနှစ်တွင်အသစ်ကဘာလဲ
Windows 10 ကိုကျဆုံးခြင်းဖန်တီးရှင်များ Update ကို (ဗားရှင်း 1709) Installing
ဒီ disc ကိုအပေါ်ကို Windows ကို Install လုပ်ခြင်းအမှား (ဆုံးဖြတ်ချက်) မဖြစ်နိုင်ပါ
အမှား: ကျနော်တို့အသစ်တစ်ခုကို partition ကိုဖန်တီးသို့မဟုတ် Windows 10 ရှိပြီးသားတပ်ဆင်နေရာချထားနိုင်ဘူး
Windows 10 ကို x64 ပေါ်တွင် Windows 10 ကို 32-bit နဲ့ပြောင်းလဲပစ်ရန်ကဘယ်လို
install လုပ်စရာမလိုဘဲတစ်ဦးကို flash drive ကနေ Windows 10 ကိုအပြေး
USB drive က program ကို Dism Go စေရန်တစ်ဦး bootable Windows ကို Creating ++
program ကို FlashBoot အတွက် flash drive ကိုအပေါ်ကို Windows 10 Installing
SSD ကို (တစ်ပြီးသား installed စနစ်၏အပြောင်းအရွှေ့) ရက်နေ့တွင် Windows 10 ကိုလွှဲပြောင်းရန်ကဘယ်လို
Windows 10 ကိုအဆင့်မြှင့် - Window7နဲ့ Windows 8.1 များအတွက်လိုင်စင်ကို update ၏လုပ်ငန်းစဉ်၏ခြေလှမ်းဖော်ပြချက်ကခြေလှမ်း, ကိုယ်တိုင် update ကို run ။
Windows 10 ကိုကိုသက်ဝင် - OS ကိုသက်ဝင်၏လုပ်ငန်းစဉ်အပေါ်တရားဝင်သတင်းအချက်အလက်။
Windows 10 ကို Reset သို့မဟုတ်အလိုအလျောက်စနစ်က reinstall လုပ်ဖို့ဘယ်လို
Windows 10 ကိုအလိုအလျောက်သန့်ရှင်းတဲ့တပ်ဆင်ခြင်း
ရုရှားဘာသာစကား interface ကို Windows 10 ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး install လုပ်နည်း
Windows 10 ကိုဘာသာစကားဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို
Windows 10 ကိုအတွင်းခင်းကျင်းပြသ Cyrillic သို့မဟုတ် gibberish fix လုပ်နည်း
ငါဘယ်လို Windows 10 ကိုတစ်ခု update ကိုဖယ်ရှားပစ်ကြဘူး - Windows 10 ကိုများနှင့်အခြားအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုရရှိရန် Boot တက် update ကို icon ကိုရှင်းလင်းဖို့ဘယ်လိုခြေလှမ်းညွှန်ကြားချက်အားဖြင့်ခြေလှမ်း။
အဆိုပါ update ကိုအပြီးပြန်မှာ Windows 10 ကနေ Windows 8.1 ကိုသို့မဟုတ်7မှလှိမ့်ဖို့ကိုဘယ်လို - ဘယ်လိုဟောင်း operating system ကိုမှပြန်လာလို့ရပါတယ် အကယ်. သင်သည် Windows 10 ကနေအဆင့်မြှင့်လျှင်, သင်ကြိုက်နှစ်သက်ကြပါဘူး။
ယခင် Operating System နဲ့တွင်လည်းဖယ်ရှားပစ်ရန်ကို manual နဲ့ဗီဒီယို - သင်က Windows 10 upgrade ဒါမှမဟုတ် operating system ကို reinstall ပြီးနောက် Windows.old folder ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို။
သော့ချက်ကို Windows 10 နဲ့ OEM-product key ကိုကြည့်ဖို့ရိုးရှင်းတဲ့လမ်း - ငါဘယ်လို Windows 10 ကို၏ product key ကိုရှာတွေ့ကြဘူး။
Windows Update ကို (သို့မဟုတ်ထို့ထက် ပို. ) အောက်တိုဘာလ 1511 ခုနှစ်မှာမလာပါဘူး - ဘာလုပ်ဖို့
Windows 10 ကိုဖန်တီးရှင်များ Update ကို, ဗားရှင်း 1703 Installing
BIOS ကိုပု Boot ကို Menu ကိုအတွက် bootable USB flash drive ကိုမမြင်ရပါဘူး
အဆိုပါ Windows Update ကိုဖိုင်တွေ 10 ၏အရွယ်အစားကိုသိရန်မည်သို့
အခြား drive ကိုတစ်ဖိုင်တွဲကို Windows 10 updates များကိုရွှေ့ဖို့ကိုဘယ်လို
Windows 10 ကို Restore
Windows 10 ကို Restore - OS ကိုနှင့်အတူပြဿနာများကိုဖြေရှင်းရန် Windows 10 ကို restore ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်သည်။
Windows 10 ကိုမစတင်ထားဘူး - ဘာလုပ်ရမှန်း?
စေနှင့်အရံသိမ်းဆည်းခြင်းမှ restore ကိုဘယ်လို - Windows 10 ကိုတစ် backup လုပ်ထားမိတ္တူ။
Windows 10 ကိုယာဉ်မောင်းတစ်ဦး backup လုပ်ထား Create
Macrium အတွက် Windows 10 ကိုတစ် backup လုပ်ထားမိတ္တူစဉျးစားကွညျ့
Check နှင့် Windows 10 ကို system files ကို၏သမာဓိ၏ပွနျလညျထူထောငျ
ဖန်ဆင်းခြင်း, အသုံးပြုခြင်းနှင့်စွန့်ပစ်ခြင်း - တစ်အချက် Windows 10 ကို restore ။
0h80070091 ပြန်လည်နာလန်ထူအချက်များကိုအသုံးပြုပြီးအမှား fix လုပ်နည်း။
စနစ် restore မှကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေများတွင်ဘေးကင်းလုံခြုံ mode သို့သွားပါဖို့ဘယ်လို - ကို Safe Mode ကို Windows က 10 ။
Windows 10 ကို loader ကို Restore
Windows 10 ကို registry ကို restore ပြန်
restore အချက်များ setting တဲ့အခါမှာမှားယွင်းနေသည် "System ကိုသင်၏စီမံအုပ်ချုပ်သူကပိတ်ထား Restore"
Recovery ကိုသိုလှောင် Windows 10 ကိုအစိတ်အပိုင်းများ
ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းက Windows 10 Tools များ
အဘယ်အရာကိုသင် Start ကို menu ကိုဖွင့်လှစ်ကြဘူးလျှင်လုပ်ဖို့ - Non-performing Start menu ရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့နည်းလမ်းများစွာ။
Windows 10 ကိုရှာဖွေရေးအလုပ်မလုပ်ပါဘူး
Windows 10 ကိုကီးဘုတ် run မ
အဆိုပါ Windows 10 ကို utility ကို Microsoft ကဆော့ဖ်ဝဲလ်ပြုပြင်ခြင်း Tool ကိုအတွက်အမှားအယွင်းများ၏အလိုအလျောက်ဆုံးမခြင်း
အင်တာနက်ကိုက Windows 10 သို့မဟုတ် system ကိုတပ်ဆင်ရာမှအဆင့်မြှင့်ပြီးနောက်အလုပ်မလုပ်ပါဘူး
Windows 10 ကိုလျှောက်လွှာကိုအင်တာနက်မချိတ်ဆက်ထားဘူးလျှင်ငါသည်အဘယ်သို့ပြုရပါမည်
အမည်မသိကွန်ယက်က Windows 10 (မျှအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှု)
Windows 10 ကိုအတွက်ကွန်ယက်အပြင်အဆင်များနှင့်အင်တာနက် setting များကို reset လုပ်နည်း
Windows Update ကို 10 ဒေါင်းလုပ်လုပ်မရလျှင်အဘယ်သို့ပြုရန်,
ကျနော်တို့ (စိတ်ကြိုက်) updates များကိုအပြီးသတ်နိုင်ခဲ့ကြဘူး။ အပြောင်းအလဲများကို Cancel ။ - ဘယ်လိုအမှား fix ရန်။
ကို Wi-Fi ချိတ်ဆက်မှုအလုပ်မလုပ်ပါဘူးသို့မဟုတ် Windows 10 ရက်နေ့တွင်ကန့်သတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်
တစ်ဦး disc ကို Windows 10 ကို 100 ရာခိုင်နှုန်းခန့်မှာ loaded လျှင်အဘယ်အရာကို
Windows ကို 10 INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE အမှား
မှားယွင်းနေသည်ဖြုတ် BOOT အသံက Windows 10
သငျသညျ Windows 10 ကို install လုပ်သည့်အခါလိုအပ်သောဒရိုင်ဘာထောက်ခံမှုကိုရှာဖွေနိုင်ခြင်း
Windows 10 ကိုအပေါ်တဦးတည်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုကွန်ယက်ကို protocols များချို့တဲ့
Windows 10 ကိုအပေါ်မှန်မှန်ကန်ကန် run မှားယွင်းနေသည်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်
Windows 10 ကိုနဲ့ငါ့ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ် laptop ကိုကို turn off မပါဘူးဆိုရင်ငါသည်အဘယ်သို့ပြုရပါမည်
ချွတ်သို့ပြောင်းသောအခါ Windows 10 ကိုပြန်လည်စတင်နေပါတယ် - ဘယ်လို Fix ရန်
Windows 10 ကိုသူ့ဟာသူဖွင်သို့မဟုတ်နှိုးလျှင်ငါသည်အဘယ်သို့ပြုရပါမည်
အသံက Windows 10 နဲ့အခြားအသံပြဿနာများအတွက်ပျောက်ကွယ်သွား
အသံဝန်ဆောင်မှုကို Windows 10, 8.1, နဲ့ Windows7မှာ run မ - ဘာလုပ်ရမှန်း?
မှားယွင်းနေသည် "Output အသံစက်ပစ္စည်းမတွေ့ရှိ" သို့မဟုတ် "နားကြပ်သို့မဟုတ်စပီကာနဲ့ချိတ်ဆက်မထား"
Fix ရန်ကဘယ်လို - မိုက်ကရိုဖုန်းက Windows 10 အလုပ်မလုပ်ပါဘူး
တစ်ဦးကို TV သို့မဟုတ်မော်နီတာနဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာ HDMI ကနေတစ်ဆင့်တစ်ဦးလက်ပ်တော့သို့မဟုတ် PC ကနေအသံမ
Windows 10 ကိုလှည်း, ကဲ့ရဲ့သံနှင့်ပေါ်လာအတွက်အသံပါလျှင်ငါသည်အဘယ်သို့ပြုရပါမည်
ကွဲပြားခြားနားသောက Windows application များ 10 သီးခြားစီအသံထုတ်လုပ်မှုနှင့် input ကိုချိန်ညှိခြင်း
Windows 10 ကိုနှင့်အစီအစဉ်များအတွက်မှုန်ဝါးဖောင့် Fix ဖို့ကိုဘယ်လို
ဖြစ်စဉ်စနစ်နှင့်ချုံ့မှတ်ဉာဏ်ဟာ CPU ကိုသို့မဟုတ် RAM ကိုသက်ရောက်ပါလျှင်အဘယျသို့
အဘယျသို့လြှငျအ TiWorker.exe သို့မဟုတ် Windows မော်ဂျူးများ Installer အလုပ်သမားသင်္ဘော Processor ကို
Windows 10 ကိုအစီအစဉ်တွင်အမှားအယွင်းများ၏အလိုအလျောက်ဆုံးမခြင်း FixWin
အဘယ်သို့ပြုရမည် - Windows 10 ကို applications များ run မဟုတ်လော
Windows 10 ကိုဂဏန်းတွက်စက် run မ
Black ကမျက်နှာပြင်ကို Windows 10 - အစား desktop ပေါ်မှာသို့မဟုတ်ရဲ့ login window ၏သင် mouse ကိုအတူအနက်ရောင်မျက်နှာပြင်ကိုမြင်ရလျှင်အဘယ်အရာ။
တချို့ကရွေးချယ်စရာ settings ကို Windows မှာ 10 သင်၏အဖွဲ့အစည်းကစီမံခန့်ခွဲကြသည် - ထိုကဲ့သို့သောဒဏ္ဍာရီများနှင့်ဘယ်လိုဖယ်ရှားပစ်ရန်လည်းမရှိအဘယ်ကြောင့်။
ပေးထားတဲ့ defaults မှဒေသခံအုပ်စုတစုမူဝါဒများနှင့်လုံခြုံရေးမူဝါဒများ reset လုပ်နည်း
Windows 10 ကိုအင်တာနက်လမ်းကြောင်းသုံးစွဲပါလျှင်ငါသည်အဘယ်သို့ပြုရပါမည်
သင်သည်အဘယ်သို့ Windows 10 ကိုတစ်ဦးပရင်တာသို့မဟုတ် MFP အလုပ်မဖြစ်ဘူးလျှင်လုပ်ဖို့
.Net Framework ကို 3.5 နဲ့ Windows 10 ရက်နေ့တွင် 4.5 - ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး install .Net Framework ကိုအစိတ်အပိုင်းများအဖြစ်တပ်ဆင်ကာလအတွင်းအမှားများကိုပြင်ပေးဖို့ကိုဘယ်လို။
Fix ရန်ကဘယ်လို - သင်က Windows 10 ရက်နေ့တွင်ယာယီပရိုဖိုင်းနဲ့ log in ပြုလုပ်ပြီးဖြစ်ကြောင်း
Windows 10 ကိုရှိတဲ့ default program ကိုသတ်မှတ်ထားခြင်းနှင့်ပြောင်းလဲပစ်ရန်ကဘယ်လို
အသင်း Windows 10 ကို File - ဖိုင်အသင်းအဖွဲ့များနှင့်တည်းဖြတ်၏ပွနျလညျထူထောငျ
ဆုံးမပဲ့ပြင်ဖိုင်မှတ်တမ်းအသင်းအဖွဲ့များအစည်းအရုံး Fixer Tool ကို File
Windows 10 ကိုအတွက် Nvidia GeForce ဂရပ်ဖစ်ကဒ်ကားမောင်းသူ Installing
desktop ပေါ်မှာ Windows ကို 10 ရက်နေ့တွင်ပျောက်ဆုံး icon များ - ဘာလုပ်ရမှန်း?
တစ်ဦးက Windows 10 စကားဝှက်ကို reset လုပ်နည်း - စကားဝှက်ကိုဒေသခံအကောင့်သို့မဟုတ် Microsoft အကောင့်ပြန်စပါ။
အဆိုပါ Windows 10 ကိုစကားဝှက်ကိုပြောင်းလဲရန်လုပ်နည်း
Windows စကားဝှက် 10 reset မှလုံခြုံရေးမေးခွန်းများကိုပြောင်းပေးဖို့ကိုဘယ်လို
Windows 10 ကိုအတွက်အရေးပါအမှား Start menu နှင့် Cortana
Windows ကိုဒုတိယ disc ကိုမမြင်ရပါဘူးဆိုရင်ငါသည်အဘယ်သို့ပြုရပါမည်
Windows 10 ကိုနှင့်မသာအမှားအယွင်းများများအတွက် hard drive ကိုစစျဆေးဖို့ကိုဘယ်လို
တစ်ဦး RAW drive ကို fix နှင့် NTFS restore လုပ်နည်း
Windows 10 ကို parameters တွေကိုဖွင့်ကြဘူး - ဘာလုပ်ရမှန်းသင် operation system settings ကိုမှမသွားနိုင်လျှင်။
ဖယ်ရှားရေးပြီးနောက် Windows 10 ကို applications များစတိုးဆိုင်ကို install လုပ်နည်း
အဘယ်သူမျှမ applications များစတိုးဆိုင်က Windows 10 ကနေ install လုပ်ပြီးပါကဘယျလို
အဘယ်အရာကို Windows အကြောင်းကြားစာ 10 လျှင်ပျောက်ဆုံးနေအသံအတိုးအကျယ်အိုင်ကွန်
အဘယ်အရာကိုကို Windows 10 မှာ webcam အလုပ်လုပ်ကိုင်လျှင်မ
ဒါဟာ Windows 10 ကို၏အရောင်အဝါကိုပြောင်းအလုပ်မလုပ်ပါဘူး
touchpad ကို Windows 10 Laptop ကိုအပေါ်အလုပ်မလုပ်ပါဘူး
အဘယ်သို့ပြုရမည် - Taskbar မှာ Windows 10 ပျောက်ကွယ်သွား?
Windows Explorer ကို 10 ပုံငယ်များမပြကြပါလျှင်အဘယျသို့
Windows 10 ကိုအတွင်းကမ္ပည်းစမ်းသပ် mode ကို disable သို့မဟုတ်ဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို
မှားယွင်းနေသည်မှားနေသောထိုးမြဲလက်မှတ် Detected, Setup ကိုအတွက်လုံလုံခြုံခြုံ Boot ကိုပေါ်လစီ Check
ဘလူးတုသ်ကို Windows 10 နဲ့ Laptop ကိုအလုပ်လုပ်မပါ
ဤစက်ကိရိယာများအတွက်ယာဉ်မောင်း load ရန်မအောင်မြင်ခဲ့ပါ။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ကားမောင်းသူပျက်စီးသို့မဟုတ် (Code ကို 39) ဦးပျောက်ဆုံးနေသည်ကို
Windows ကိုတစ်ဦးမှတ်ဉာဏ်ကဒ်သို့မဟုတ် USB drive ကို၏ပုံစံချပေးဖြည့်စွက်လို့မရဘူး
Windows 10 ကိုအတွက် class မှတ်ပုံတင်မဟုတ်မှားယွင်းနေသည်
bug တွေ DPC_WATCHDOG_VIOLATION Windows 10 ကို fix လုပ်နည်း
ဘယ်လိုဝေဖန်မှု PROCESS အပေါ်အမှားပြင်ရန်အတွက် Windows 10 မှာအပြာရောင် screen ကိုသေဆုံး
Windows 10 ကို SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION ထဲမှာ bugs fix လုပ်နည်း
Windows 10 ကို CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT ထဲမှာ bugs fix လုပ်နည်း
အမှား fix လုပ်နည်း "ဒီ application ကိုလုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်များအတွက်ပိတ်ဆို့ထားပါသည်။ အဆိုပါစီမံခန့်ခွဲသူကဒီလျှောက်လွှာများ၏သေဒဏ်စီရင်ပိတ်ဆို့ထားပါတယ်" ကို Windows 10 မှာ
ဘယ်လိုအမှား fix ရန်သင့် PC မှာဤလျှောက်လွှာကို run လို့မရပါဘူး
non-စာမျက်နှာရေကူးကန်နီးပါးအပေါငျးတို့သ RAM ကို Windows 10 ကိုသိမ်းပိုက်အဘယျသို့လျှင်
D3D11 CreateDeviceAndSwapChain Fix စေရန်မည်သို့မှုမအောင်မြင်ပါသို့မဟုတ် Windows 10 နဲ့ Windows7နှင့်အတူကွန်ပျူတာပေါ်တွင်မဟုတ် d3dx11.dll
ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ပျောက်ဆုံးသော vcruntime140.dll ကို download လုပ်လုပ်နည်း
အဆိုပါ Witcher 3, Sony ကဂတ်စ်နှင့်အခြားအစီအစဉ်များအတွက် vcomp110.dll ကို download လုပ်လုပ်နည်း
အမှားစတင်ခြင်း .NET Framework ကို4ပြင်ပေးဖို့ကိုဘယ်လို
ဗီဒီယိုကိုမောင်းသူတုံ့ပြန်ရပ်တန့်ခြင်းနှင့်အောင်မြင်စွာဆယ်ယူထားပြီး - Fix ရန်ကဘယ်လို
အမှား 0x80070002 fix လုပ်နည်း
သူကကြော်ငြာတွေနှင့်အတူ browser ကိုဖွင့်လှစ်ပါလျှင်အဘယျသို့
ကွန်ပျူတာကိုဖွင့်ခြင်းနှင့်ချက်ချင်းပိတ်နေသည် - Fix ရန်ကဘယ်လို
ဘာ csrss.exe လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အဘယ်သို့ပြုလျှင် csrss.exe သင်္ဘော Processor ကို
ဖြစ်စဉ်ကို MsMpEng.exe Antimalware ဝန်ဆောင်မှု Executable အဘယျသို့သောဘယ်လိုပိတ်ရန်
COM အစားထိုး dllhost.exe လုပ်ငန်းစဉ်၏အဘယျသို့သော
Windows Defender အဘို့အမှားယွင်းနေသည် 0x80070643 ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ် updates များကို
Windows 10 ကိုအတွင်းမှတ်ဉာဏ်အမှိုက်ပုံ၏ထိန်းသိမ်းခြင်းကို enable လုပ်နည်း
အဆိုပါကွန်ပျူတာစိစစ် DMI ရေကူးကန်မှာ Data Startup မှာဆွဲထားတဲ့
နှစ်ဦးကတူညီအသုံးပြုသူသော့ခတ် screen ပေါ်မှာ Windows ကို 10 ရက်နေ့မှာ logging သည့်အခါ
fix ဖို့ဘယ်လို - လျှောက်လွှာဂရပ်ဖစ်ဟာ့ဒ်ဝဲမှဝင်ရောက်ခွင့်ကိုပိတ်ပင်ထား?
ဘယ်လို, ဒီတံဆိပ်အားဖြင့်ရည်ညွှန်းပြောင်းလဲသွားတယ်သို့မဟုတ်ပြောင်းရွှေ့သောအမှားအရာဝတ္ထုကို fix ငှါ၎င်း, ဖြတ်လမ်းတော့ဘူးအလုပ်မလုပ်ပါဘူး
အဆိုပါမေတ္တာရပ်ခံစစ်ဆင်ရေး (အမှားကုဒ် 740) တိုးမြှင့်ရန်လိုအပ်သည် - Fix ရန်ကဘယ်လို
Fix ရန်ကဘယ်လို - Windows Explorer ကို 10 နှစျခုတူညီ disk ကို
Windows 10 ကိုအမှား (အပြာရောင်ဖန်သားပြင်) VIDEO_TDR_FAILURE
Windows 10 ကို startup မှာမှားယွင်းနေသည် 0xc0000225
regsvr32.exe မှတ်ပုံတင်ရေးဆာဗာ CPU ကိုသက်ရောက် - Fix ရန်ကဘယ်လို
မလုံလောက်သည့်စနစ်အရင်းအမြစ်များကိုကို Windows 10 မှာစစ်ဆင်ရေးဖြည့်စွက်ရန်မတည်ရှိ
ISO ကိုဆက်သွယ်အမှား - ဖိုင်ချိတ်ဆက်ရန်မအောင်မြင်ခဲ့ပါ။ ဖိုင်ကိုအနေနဲ့ NTFS volume ပေါ်ကြောင်းသေချာပါစေ, ဖိုင်တွဲသို့မဟုတ်အသံအတိုးအကျယ် compressed မရရှိရမည်
ဘယ်လိုက Windows 10 အတွက် DNS ကို cache ကိုရှင်းလင်းဖို့ Windows7နဲ့ 8
device ကိုများအတွက်မလုံလောကျအခမဲ့အရင်းအမြစ်များကို (Code ကို 12) - fix ဖို့ဘယ်လို
Fix ရန်ကဘယ်လို - စံပလီကေးရှင်းကို Windows 10 မှပြန်လည်စတင်ဖြစ်ပါသည်
Windows Explorer ကိုကနေပြန်လည်နာလန်ထူ partition ကိုဖုံးကွယ်ဖို့ကိုဘယ်လို
Windows 10 ကိုအတွက်မလုံလောက်သော disk space ကို - ဘာလုပ်ရမှန်း
ဂိမ်းများနှင့်အစီအစဉ်များကိုအပြေးလာသောအခါ 0xc0000906 application ကိုအမှား fix လုပ်နည်း
အဘယ်အရာကိုသင် screen resolution ကို Windows 10 ကိုမပြောင်းကြပါလျှင်လုပ်ဖို့
မိုက်ခရိုဆော့ဖ် Edge အတွက် bug ကို fix ဖို့ကိုဘယ်လို INET_E_RESOURCE_NOT_FOUND
device ကိုမန်နေဂျာအတွက်ဒီကိရိယာကိုစနစ်တကျအလုပ်မလုပ်သောအမှား, code ကို 31 ပြင်ပေးဖို့ကိုဘယ်လို
Fix ရန်ကဘယ်လို - သင်ဖိုင်တစ်ဖိုင်သို့မဟုတ်ဖိုလ်ဒါကိုဖျက်ပစ်တဲ့အခါမှာ item မတွေ့ရှိနေသည်
ဒါကြောင့်ပြဿနာများ (Code ကို 43) သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ Windows ကိုစနစ်ကဒီကိရိယာကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီ - Fix ရန်ကဘယ်လို
ဘယ်လို Windows ကို fix မှအလိုအလျှောက်ဤကွန်ယက်များအတွက် proxy setting ကို detect မနိုင်
ငါ password ကို Microsoft ကအကောငျ့ကိုမေ့လျော့နေလျှင်ငါသည်အဘယ်သို့ပြုရပါမည်
fix ဖို့ဘယ်လို - က Windows 10, 8 သို့မဟုတ် Windows7ရက်နေ့တွင်ဂိမ်းကို run မနေပါနဲ့
ဘာလုပ်မှ - အဆိုပါဖိုင်အဆုံးစွန်ဖိုင် system အတွက်ကြီးမားလွန်းပါသလဲ
မှားယွင်းနေသည်ကိုသင်လျှောက်လွှာ esrv.exe run တဲ့အခါမှာ - ဘယ်လို fix မှ
လုံခြုံစွာ device ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ဆုံးရှုံးသွားသော - ဘာလုပ်ရမှန်း?
Fix ရန်ကဘယ်လို - က Windows Installer ၏ဝန်ဆောင်မှုမှဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိနိုင်ခြင်း
စနစ်စီမံအုပ်ချုပ်သူကသတ်မှတ်ဒီ setting ကိုတားမြစ်ထားသောမူဝါဒက
device ကို၏ installation မူဝါဒစနစ်အောက်တွင်တားမြစ်ထားသည်, သင့် system ကိုစီမံခန့်ခွဲသူကိုဆက်သွယ် - ဘယ်လို Fix ရန်
သင်မှန် mouse ကိုနှိပ်လျှင် Explorer ကိုဆွဲထားတဲ့
အမှားတစ်ဦးက disk ကိုဖတ်ပြီးသားအမှား fix ဖို့ကိုဘယ်လို startup မှာဖြစ်ပွားခဲ့သည်
အဘယျသို့လျှင်သင်္ဘောထောင်ချောက် Processor ကို
bug တွေကို fix ဖို့ကိုဘယ်လို DXGI_ERROR_DEVICE_REMOVED
bug တွေ WDF_VIOLATION HpqKbFiltr.sys fix လုပ်နည်း
explorer.exe - system ကိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအမှားနှင့်အတူ
sppsvc.exe သင်္ဘော Processor ကို - ဘယ်လို Fix ရန်
အဘယ်သို့ပြုရမည် - taskbar မှာ Windows 10 ပျောက်သွား?
Windows 10 ကိုအတွက် .Net Framework ကို 3.5 ကို install သည့်အခါ 0x800F081F သို့မဟုတ် 0x800F0950 Fix ရန်ကဘယ်လို
ကြောင့်ဒီကွန်ပျူတာအားလျှောက်ထားသောကန့်သတ်မှဖျက်သိမ်းစစ်ဆင်ရေး - ပြုပြင်ဖို့ဘယ်လို
သငျသညျကို Windows 10 မှာဓာတ်ပုံသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုဖွင့်တဲ့အခါမှာမမှန်ကန်တဲ့ Registry ကိုတနျဖိုးများအတွက်အမှား fix လုပ်နည်း
Fix ရန်ကဘယ်လို - သင် EXE ကို run တဲ့အခါမှာအဆိုပါ interface ကိုပံ့ပိုးပေးမထားပါ
ဆုံးဖြတ်ချက် - အ command prompt ကိုသင်၏စီမံအုပ်ချုပ်သူကပိတ်ထားသည်
ဒါဟာ Windows မှာ 10, လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်အင်္ဂါရပ်များအသုံးပြုမှုနှင့်အတူအလုပ်လုပ်တယ်
Windows 10 ကိုအကောင်းဆုံး Antivirus ကို
(များစွာကိုအသုံးပြုသူများကိုမသိရပါဘူး) ကို built-in ကို Windows system utilities
Windows 10 ကိုအခမဲ့ Antivirus ကို BitDefender အခမဲ့ Edition ကို
Windows 10 ကိုအတွက်အာရုံစိုက်မှုများ၏အာရုံကိုသုံးပြီး
Windows ကို 10 Programs ကို Remove
Windows 10 ကိုအတွက်ဂိမ်း mode ကိုဖွင့်ဖို့ကိုဘယ်လို
Windows ကို 10 Miracast ကို enable လုပ်နည်း
Windows ကို 10 ရက်နေ့တွင်သင့်ရဲ့ Android သို့မဟုတ်သင့်ကွန်ပျူတာ (လက်ပ်တော့ပ်) မှရုပ်ပုံများကိုလွှဲပြောင်းရန်ကဘယ်လို
Windows 10 ကိုကို virtual desktops တွေနဲ့
သင့်ရဲ့ PC ကိုမှသင့် TV ကိုချိတ်ဆက်ဖို့ကိုဘယ်လို
Windows ကို 10 ရက်နေ့တွင်သင်၏ဖုန်း app ကို အသုံးပြု. သင်၏ PC ကနေ SMS ပို့ပါ
ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး install, ဒါမှမဟုတ်သင့်ကိုယ်ပိုင်ဆောင်ပုဒ်ကိုဖန်တီးရန်ကဘယ်လို - themes ကို Windows 10 ။
ဖိုင်ဆယ်တင်ရေးကို enable နှင့်မည်သို့အသုံးပြုရမည်ကို - သမိုင်းဖိုင်များကို Windows 10 ။
အဆိုပါ Windows 10 ကိုဂိမ်း pad ပါသုံးစွဲဖို့ကိုဘယ်လို
built-in Windows 10 ကိုတွင် Remote Desktop ကိုလျင်မြန်စွာအကူအညီများအတွက်လျှောက်လွှာ
Windows 10 ကို software နှင့် applications များ၏ပစ်လွှတ်ကာကွယ်တားဆီးဖို့ဘယ်လို
တစ်ဦးက Windows 10 အသုံးပြုသူကိုဖန်တီးရန်ကဘယ်လို
အသုံးပြုသူကို Windows 10 မှာအုပ်ချုပ်သူအောင်လုပ်နည်း
Microsoft Windows နဲ့ 10 မှာအကောင့်တစ်ခုကိုဖျက်ပစ်ရန်
Windows 10 ကိုအသုံးပြုသူဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို
E-mail ကို Microsoft ကအကောငျ့ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ကဘယ်လို
Windows ကို 10 ရက်နေ့မှာ logging အခါစကားဝှက်ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို - သင် startup မှာနှင့်အိပ်စက်ခြင်း mode ကိုကနေထွက်ပေါက်အပေါ်လော့ဂ်အခါစကားဝှက်ကို disable လုပ်ဖို့နည်းလမ်းနှစ်ခု။
အဆိုပါ Windows 10 ကို Task Manager ကိုဖွင့်လှစ်ဖို့ကိုဘယ်လို
Windows 10 ကိုစကားဝှက်ကို install လုပ်နည်း
အဆိုပါကိုယ်ပွား Windows 10 ကိုပြောင်းလဲခြင်းသို့မဟုတ်ပယ်ဖျက်ဖို့ကိုဘယ်လို
အဆိုပါ Windows 10 ကိုမျက်နှာပြင်သော့ခတ် disable လုပ်နည်း
အဆိုပါ Windows 10 ကိုဂိမ်း pad ပါ disable လုပ်နည်း
အဆိုပါ Windows 10 ကို desktop ပေါ်မှာဝေါလ်ပေပါကိုပြောင်းလဲရန်အလိုအလျှောက်ပြောင်းလဲမှုကို enable သို့မဟုတ်ကာတွန်းဝေါလ်ပေပါကိုတင်ဖို့ကိုဘယ်လို
အဘယ်သို့ငါက Windows 10 နဲ့ Laptop ကိုဘက်ထရီအပေါ်တစ်ဦးအစီရင်ခံစာတစ်ခုသို့မဟုတ်တက်ဘလက်ရကြဘူး
laptop ကိုတရားစွဲဆိုခံရခြင်းကိုမရသည့်အခါအားသွင်း Windows 10 ကိုများနှင့်အခြားအချိန်များနှင့်အတူအလုပ်မလုပ်ပါဘူး
တစ်ဦး stand-alone Windows Defender 10 သုံးစွဲဖို့ကိုဘယ်လို
Windows 10 ကိုရှိတဲ့ default browser ကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲ
Klondike Solitaire နှင့်ပင့်ကူ, Window 10 အတွက်အခြားစံနှုန်းဂိမ်း
Windows 10 ကိုအတွက်မိဘအုပ်ထိန်းသူထိန်းချုပ်မှုများ
Windows 10 ကိုကွန်ပျူတာအချိန်များအတွက်အလုပ်ကန့်သတ်ရန်လုပ်နည်း
ဘယ်လိုက Windows 10 ရက်နေ့တွင် log ရန်စကားဝှက်ကိုဝင်ရောက်သည့်အခါအမှားအရေအတွက်ကန့်သတ်ရန်နှင့်တစ်စုံတစ်ဦးကသင့်ရဲ့ password ကိုခန့်မှန်းဖို့ကြိုးစားနေချိန်တွင်သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုသော့ခတ်ဖို့။
kiosk Mode ကို Windows က 10 (တစ်ဦးတည်းသာလျှောက်လွှာသုံးပြီးအသုံးပြုသူများ၏ကန့်သတ်) ။
Windows ကို 10 hidden features တွေ - ထိုစနစ်၏အချို့အသုံးဝင်သော features အသစ်, သင်သတိထားမိမှာမဟုတ်ဘူး။
Windows 10 ကိုအတွက် BIOS ကိုသို့မဟုတ် UEFI ရိုက်ထည့်ဖို့ကိုဘယ်လို -, BIOS setup ကိုနှင့်အချို့သောအလားအလာပြဿနာများ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ထဲမှာ input ကိုရွေးချယ်စရာအမျိုးမျိုး။
မိုက်ကရိုဆော့ဖ Edge browser ကို - အဘယ်အရာကိုသစ်ကိုဖွင့်မိုက်ကရိုဆော့ဖ Edge ကို Windows 10 Browser ကို၎င်း၏ Configuration နဲ့စွမ်းရည်အတွက်ပေးအပ်သည်။
bookmarks ကို Microsoft က Edge တင်သွင်းတင်ပို့ဖို့ကိုဘယ်လို
ပိတ်စုံစမ်းမှုကို Microsoft Edge အားလုံးကို tabs များပြန်လာလုပ်နည်း
ငါဘယ်လို browser ကို Microsoft က Edge ကို reset ပါဘူး
Windows 10 ကိုအင်တာနက် Explorer ကို
Windows 10 ကိုချွေတာမျက်နှာပြင်စစ်ဆေးသို့မဟုတ်ပြောင်းလဲပစ်ရန်ကဘယ်လို
Windows 10 ကို On-screen ကိုကီးဘုတ်
သင်၏ desktop မှ gadgets ကို install ဖို့ဘယ်လို - က Windows 10 ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ။
ငါက Windows 10 စွမ်းဆောင်ရည်အညွှန်းကိန်းကိုဘယ်လိုရှာရမလဲ
အဘယ်သို့ငါက Windows 10 မှာကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေထဲမှာ screen resolution ကိုပြောင်းလဲပစ်ဘူး
အုပ်ချုပ်သူအဖြစ်နှင့်ပုံမှန်အတိုင်းအဖြစ် Windows 10 ကို command prompt ကိုဖွင့်လှစ်ဖို့ကိုဘယ်လို
တစ်ဦးကို Windows PowerShell ဖွင့်လှစ်ဖို့ကိုဘယ်လို
Windows 10 ကိုများအတွက် DirectX ကို 12 - အဘယ်သို့ငါ 12-ကြိမ်မြောက်ဗားရှင်းနှင့်အခြားကိစ္စရပ်များအားထောကျပံ့ပေးအဘယ်အရာကိုဗီဒီယိုကတ်များ, DirectX ကို၏ဗားရှင်းကိုအသုံးပြုသိကြပါဘူး။
Windows 10 ကိုအတွက် Menu ကို Start - ဒြပ်စင်များနှင့်စွမ်းရည်များ, စိတ်ကြိုက် Start မီနူးဒီဇိုင်း။
ဘယ်လို Desktop ပေါ်မှာကွန်ပျူတာ icon ကိုပြန်သွားဖို့ - က Windows 10 အတွင်းခင်းကျင်းပြသ icon ပေါ်မှာဒီကွန်ပျူတာကိုဖွင့်ဖို့နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်။
desktop ပေါ်မှာထံမှတောင်းကိုဖယ်ရှားသို့မဟုတ်လုံးဝတောင်း disable လုပ်နည်း
နယူးကီးဘုတ်က Windows 10 shortcuts - သစ်ကို keyboard shortcuts တွေကိုတစ်ဖော်ပြချက်အဖြစ်သင်တို့ဆီသို့ကျွမ်းတဝင်မရှိသောဖြစ်မည်အကြောင်းအချို့အဟောင်းတွေ။
Registry Editor ကို Windows 10 ကိုဖွင့်လှစ်ဖို့ကိုဘယ်လို
Device Manager Windows 10 ကိုဖွင့်လှစ်ဖို့ကိုဘယ်လို
Quick Launch (အစာရှောင်ခြင်း Boot တက်) Windows 10 ကိုဖွင့်သို့မဟုတ် disable လုပ်နည်း
extensions တွေကို Windows 10 ကိုဖိုင်တွေပြသနိုင်ဖို့ဘယ်လို
Windows ကို 10 compatibility mode ကို
Windows 10 ကိုအတွက်အဟောင်းဓာတ်ပုံကိုကြည့်ရှုသူပြန်လာလုပ်နည်း
Windows 10 ကိုတစ်ဦးစခရင်ပုံစေရန်နည်းလမ်းများ
ယင်း utility ကိုနှင့်တစ်ပိုင်းတစ်စကောက်ကြောင်းကို Windows 10 မှာ screenshots များ၏ဖန်ဆင်းခြင်း
Windows ကို 10 ရက်နေ့တွင် Run ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်မှာ
ဘယ်မှာ, restore, ပြောင်းလဲပစ်ရန်မည်သို့မည်ပုံ - ဗိုလ်ခြေကို Windows 10 မှာ file
Windows 10 ကိုများအတွက် Package Manager ကို PackageManagement (OneGet)
Windows 10 ကို (Windows အတွက် Linux ကို subsystem သို့) အတွက် Linux ကိုကား Bash shell ကို Installing
နောကျဆကျတှဲတစ်ဦးဖုန်းသို့မဟုတ် Tablet ကိုထံမှကြိုးမဲ့ထုတ်လွှင့်ပုံရိပ်တွေအဘို့ကို Windows 10 မှာ "Connect ကို" အင်္ဂါရပ်သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာမော်နီတာမှ
ဘယ်လိုက Windows 10 အတွက်ကီးဘုတ်နှင့်အတူ mouse ကိုထိန်းချုပ်ဖို့, 8 နှင့် 7
ခြားနားချက်မြန်ဆန်ပြီးပြည့်စုံသောပုံစံချပေးနှငျ့အခြို့ကိုမောင်းဖို့ရှေးခယျြ, flash drive ကိုသို့မဟုတ် SSD ကိုကဘာလဲ
Windows 10 ကိုအပေါ်ပြုစုသူမုဒ်ကို enable လုပ်နည်း
Windows 10 ကိုအတွက်မလိုအပ်တဲ့ဖိုင်တွေထဲကနေ automatic disk ကိုသန့်ရှင်းရေး
Windows 10 ကိုထည့်သွင်းခြင်းနှင့် Appx AppxBundle လုပ်နည်း
ဘယ်လို Windows 10 ကိုတစ်ဦးက hidden Wi-Fi ကွန်ယက်ကိုချိတ်ဆက်လျက်နှင့်မသာမှ
အဆိုပါ Windows 10 ကို disk space ကိုသုံးစွဲဖို့ကိုဘယ်လို
Windows ကို 10 REFS File System
Windows ကို 10 ရက်နေ့တွင်သင့် hard drive ကိုသို့မဟုတ် SSD အပေါ် partitions ကို, 8 နှင့်7ပေါင်းစည်းဖို့ကိုဘယ်လို
ဘယ်လို Windows တွင်တစ်ဦးလင်းနို့ဖိုင်ကိုဖန်တီးရန်
Windows 10 ကိုအတွက်ဗိုင်းရပ်စ်ကိုစာဝှက်ရေးသားသူဆန့်ကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး (ဖိုလ်ဒါမှထိန်းချုပ်ထားသောလက်လှမ်း)
Windows တွင် Microsoft က Remote Desktop ကနေတဆင့်ဝေးလံခေါင်သီကွန်ပျူတာထိန်းချုပ်မှု
Built-in application များသုံးပြီး Windows 10 ကိုတစ်ဦးကဗီဒီယိုကိုချုံ့ဖို့ကိုဘယ်လို
Windows 10 ကိုအတွက် Control Center ကိုကွန်ယက်နှင့်မျှဝေခြင်းရေးစင်တာဖွင့်လှစ်ဖို့ကိုဘယ်လို
Windows အ Task Scheduler 10, 8 နဲ့ Windows7ကို run ဖို့5နည်းလမ်းများ
Windows 10 ကို built-in ကဗီဒီယိုအယ်ဒီတာ
Windows 10 ကိုပြတင်းပေါက်အတားအဆီးကို disable လုပ်နည်း
အဝေးမှအင်တာနက်ကနေတစ်ဆင့် Windows 10 ကိုသော့ခတ်ဖို့ကိုဘယ်လို
မည်သည့်အစီအစဉ်ကိုက Windows 10 မှာအီမိုဂျီရိုက်ထည့်ရန်နှင့် panel ကအီမိုဂျီကို disable လုပ်ဖို့ဘယ်လို2နည်းလမ်းများ
Configuring Windows 10 ကို system ကိုအပြောင်းအလဲနှင့်ပိုပြီး
စင်ကြယ်သော Boot တက်က Windows 10, 8 နဲ့ Windows7- စင်ကြယ် Boot တက်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကဖြစ်ခဲ့သည်ဖျော်ဖြေဖို့ဘယ်လောက်။
Windows ကို 10 startup - ဘယ်မှာ Startup programs တစ်ချို့ add သို့မဟုတ်ဖယ်ရှားပစ်ရန်မည်သို့မည်ပုံသည် startup folder ကိုဖြစ်ပါသည်, နှင့်အခြားနေရာများတွင်။
Windows ကို 10 ရက်နေ့မှာ logging လာသောအခါအလိုအလျောက်ပြန်ဖွင့်အစီအစဉ်များကို disable လုပ်နည်း
ငါဘယ်လိုပရိသတ်ဗားရှင်းသိနဲ့ Windows 10 bit မှာမရှိဘူး
အသစ်က Operating System (နည်းလမ်းနှစ်ခု) ၌ဘုရားသခင် Mode ကိုဖွင့်ဖို့ဘယ်လို - Windows 10 ကို၌ဘုရားသခင် Mode ကို
Windows 10 ကိုအတွက် SmartScreen Filter ကို disable လုပ်နည်း
Windows 10 ကိုအဘို့အလိုအလျှောက်မွမ်းမံ drivers တွေကို disable လုပ်နည်း
Windows 10 ကိုအတွက် hibernation - enable သို့မဟုတ် Start Menu ထဲမှာ hibernation add ကို disable လုပ်ဖို့။
အိပ်စက်ခြင်း mode ကို Windows 10 ကို disable လုပ်နည်း
disable နဲ့ Windows 10 မှာ OneDrive ပယ်ဖျက်ဖို့ကိုဘယ်လို
Windows Explorer ကို 10 ကနေ OneDrive ဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို
အခြား disk ကိုမှ Windows 10 ကိုအတွက် OneDrive folder ကိုရွှေ့, သို့မဟုတ်ပါကအမည်ပြောင်းဖို့ကိုဘယ်လို
PowerShell သုံးပြီးစံ applications များ၏ရိုးရှင်းဖယ်ရှားရေး - Windows 10 ကို built-in application များဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို။
Windows 10 ကိုအတွက် Wi-Fi ကိုဖြန့်ဖြူး - OS အသစ်ကိုအတွက် Wi-Fi ကိုကနေတဆင့်အင်တာနက်ကိုဖြန့်ဝေရန်နည်းလမ်းများ။
browser ကို Edge အတွက် Downloads ဖိုင်တွဲရဲ့တည်နေရာကိုပြောင်းလဲဖို့ကိုဘယ်လို
desktop ပေါ်မှာ Edge အပေါ်တစ်ဦး shortcut တခုကိုဖန်တီးရန်ကဘယ်လို
Windows 10 ကို shortcuts တွေကိုထံမှမြှားဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို
Windows 10 ကိုသတိပေးချက် disable လုပ်နည်း
အကြောင်းကြားစာ Windows 10 ကိုအသံကို turn off လုပ်နည်း
Windows အ 10 ကွန်ပျူတာ name ကိုပြောင်းပေးဖို့ကိုဘယ်လို
Windows ကို 10 UAC ကို disable လုပ်နည်း
Windows Firewall ကို 10 disable လုပ်နည်း
Windows 10 ကိုတစ်အသုံးပြုသူ folder ကိုအမည်ပြောင်းဖို့ကိုဘယ်လို
Windows ကို 10 က hidden file တွေကိုဖုံးကွယ်သို့မဟုတ်ပြသနိုင်ဖို့ဘယ်လို
တစ်ဦး hard disk ကိုသို့မဟုတ် SSD ကိုဖုံးကွယ်ဖို့ကိုဘယ်လို
တပ်ဆင်ပြီးနောက်မှာ Windows 10 မှာ SATA များအတွက် AHCI mode ကို enable လုပ်နည်း
ကဏ္ဍများသို့ disk ကို partitioner လုပ်နည်း - ပု C နှင့် D ကိုအပေါ်ကို C drive ကိုခွဲရန်နှင့်အလားတူအရာလုပ်ဆောင်ဖို့ဘယ်လို။
Windows Defender လျှပ်စစ်ဓါတ်အားများပြတ်တောက်မှုအတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း (operating system ကိုလမ်းအဖြစ်ယခင်ဗားရှင်းအဘို့အလုပ်မလုပ်ပါဘူး) - Windows Defender 10 disable လုပ်နည်း။
အဆိုပါ Windows Defender 10 ခြွင်းချက် add ဖို့ကိုဘယ်လို
Windows 10 ကိုနောက်ခံလူကို enable လုပ်နည်း
Windows 10 ကိုအတွက်နှစ်ဦးစလုံးကိုပြောင်းလဲ, နှင့်ရဲ့ login screen ပေါ်မှာ keyboard shortcuts တွေကိုပိုမို - ငါဘယ်လို input ကိုဘာသာစကား switching များအတွက်ကီးဘုတ် shortcut ကိုပြောင်းလဲပစ်ကြဘူး။
Windows Explorer ကိုအတွက်မကြာခဏအသုံးပြုဖိုလ်ဒါများနှင့်မကြာသေးမီဖိုင်များကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို
Windows Explorer ကို 10 ကနေလျင်မြန်စွာလက်လှမ်းဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို
Windows 10 ကိုအတွက် Wi-Fi ကို၏ password ကိုထွက်ရှာတွေ့ဖို့ကိုဘယ်လို
ဒစ်ဂျစ်တယ်လက်မှတ်ယာဉ်မောင်း Windows 10 ကို disable လုပ်နည်း
ဘယ်လိုက Windows 10 မှာ WinSxS ဖိုင်တွဲကိုရှင်းလင်း
Windows 10 ကို start-up menu ထဲက application ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်အကြံပြုဘယ်လို
Windows ကို 10 ProgramData folder ကို
အဘယ်အရာ System ကို Volume ကိုပြန်ကြားရေးဖိုင်တွဲများနှင့်မည်သို့မည်ပုံအဲဒါကိုရှင်းလင်းဖို့
Windows ကို 10 နှင့်အတူပွင့်လင်း menu ကိုပစ္စည်းများကိုထည့်ရန်သို့မဟုတ်ဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို
Windows 10 ကိုအတွက်ကီးဘုတ် disable လုပ်နည်း
သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ် laptop ကိုအပေါ်ကို install သောဂရပ်ဖစ်ကဒ်ကိုသိရန်မည်သို့
အခြား drive ကိုမှယာယီဖိုင်တွေကိုရွှေ့ဖို့ကိုဘယ်လို
Windows 10 ကိုအတွက်ချိန်ညှိခြင်း ClearType
Windows ကို 10 ရက်နေ့တွင် Google Chrome ကို updates များကို disable လုပ်နည်း
Windows 10 ကိုအတွက် hard drive ဒါမှမဟုတ် flash drive ကို icon ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ကဘယ်လို
drive ကိုစာတစ်စောင်ချောင်းကိုကိုပြောင်းလဲဒါမှမဟုတ် USB flash drive ကိုများအတွက်ရာသက်ပန် drive ကိုစာတစ်စောင် assign လုပ်နည်း
ဘယ်လိုက Windows အတွက် D ကို drive ကိုဖန်တီးရန်
Start button ကို Windows က 10 ဆက်စပ် Menu ထဲမှာ Control Panel ကိုပြန်သွားဖို့ကိုဘယ်လို
Windows 10 ကို, Start Menu ထဲမှာဖြတ်လမ်းတည်းဖြတ်ရန်ကဘယ်လို
Windows Explorer ကို 10 ဆက်စပ် Menu ထဲမှာကို item "ပွင့်လင်းစစ်ဌာနချုပ် Window" ပြန်လာလုပ်နည်း
ဖိုင်တွဲ DriverStore FileRepository ရှင်းလင်းဖို့ကိုဘယ်လို
Windows 10 ကိုများအတွက်ကဏ္ဍများသို့ချောင်းကိုချိုးဖျက်ဖို့ဘယ်လို
တစ်ဦး flash drive ကိုအပေါ် partitions ကိုဖျက်ပစ်ရန်ကဘယ်လို
လုပ်ငန်းစဉ်၏အဘယျသို့သော Runtime ပွဲစားနှင့်အဘယ်ကြောင့် runtimebroker.exe သင်္ဘော Processor ကို
Windows ကို 10 ရက်နေ့တွင်ရောနှောထားသော Reality Portal ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို
Windows 10 ကိုအတွက်ယခင် entry ကိုအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကြည့်ရှုရန်ကဘယ်လို
Windows 10 ကိုအတွက်မလိုအပ်သော Context Menu ကပစ္စည်းများကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို
Windows 10 ကိုတကလစ်နှင့်အတူဖိုင်တွေနဲ့ဖိုင်တွဲ၏အဖွင့်ကိုဖွင်သို့မဟုတ် disable လုပ်နည်း
Windows ကို 10, ကွန်ယက်ဆက်သွယ်မှု၏နာမတော်ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ကဘယ်လို
ထို Desktop ပေါ်မှာ icons များ၏အရွယ်အစား, Windows Explorer ကို၌၎င်း, ကို Windows taskbar 10 ပြောင်းပေးဖို့ကိုဘယ်လို
Windows Explorer ကို 10 ကနေ folder ကိုရှုထောင်အရာဝတ္ထုဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို
Windows အ Context Menu က 10 ကနေ (ဝေမျှမယ်) Send ရန်, အမှတ်ဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို
Windows ကို 10 သုတ်ဆေး 3D ဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို
ဘယ်လိုက Windows 10, 7, Mac OS နဲ့, Android နဲ့ iOS ကိုအတွက် Wi-Fi ကွန်ရက်မေ့ပစ်ရန်
ဘာ swapfile.sys file ကိုဘယ်လိုဖယ်ရှားပစ်ရန်
Windows 10 ကိုအသီးအသီးဖိုင်တွဲ၏အရောင်ကိုပြောင်းလဲဖို့ကိုဘယ်လို
Windows ကို 10 TWINUI ကဘာလဲ
အဆိုပါ Timeline ကို Windows 10 ကို disable ပြုလုပ်အတွက်နောက်ဆုံးအရေးယူရှင်းလင်းဖို့ကိုဘယ်လို
အဆိုပါ Windows 10 ကို Lock ကိုမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိမော်နီတာကို turn off ဖို့အချိန်ချိန်ညှိခြင်း
Windows 10 ကိုအတွက် SSD ကိုနှင့် HDD ၏အလိုအလျှောက် Defragmentation ကို turn off လုပ်နည်း
က command line သုံးပြီး hard drive ကိုဒါမှမဟုတ် USB flash drive ကို format လုပ်နည်း
Windows Defender 10 နှင့်အတူမလိုလားအပ်သောဆော့ဖ်ဝဲကိုဆန့်ကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကို enable လုပ်နည်း
Windows ကို 10, 8.1, နဲ့ Windows များအတွက်မီဒီယာ Feature ကို Pack ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ဖို့ကိုဘယ်လို 7
အဘယ်အရာ inetpub ဖိုင်တွဲများနှင့်ဘယ်လိုဖယ်ရှားပစ်ရန်
ဘယ်လို ESD က ISO ကို Windows 10 မှတစ်ဦး image file ကိုပြောင်းမှ
Windows 10 ကိုရှေးခယျြစရာဖုံးကွယ်ဖို့ကိုဘယ်လို
ဘယ်လို Windows တွင်တစ်ဦးကို virtual hard drive ကိုဖန်တီးရန်
Windows ကို Send အတွက် Context Menu ကမှပစ္စည်းများ add သို့မဟုတ်ဖယ်ရှားပစ်ရန်
Windows အ registry ကနေ backup တခုကိုဖန်တီးရန်ကဘယ်လို
Windows 10 ကိုအတွက်မီးမောင်းထိုးပြအရောင်ကိုပြောင်းလဲဖို့ကိုဘယ်လို
သင့်ရဲ့ကီးဘုတ်ပေါ်မှက Windows Key ကို disable လုပ်နည်း
Task Manager ကို Windows က 10, 8.1, နဲ့ Windows ကို disable လုပ်ဖို့ကဘယ်လို 7
စတင်အစီအစဉ်များနှင့် applications များက Windows Lock 10 အစီအစဉ်ကို AskAdmin
သငျသညျကို Windows 10 related မဆိုမေးခွန်းများရှိပါက site ပေါ်တွင်မဖုံး, မှတ်ချက်များအတွက်သူတို့ကိုမေးဖို့ကျွန်မဖြေဆိုရန်လည်းရွှင်လန်းခြင်းရှိလိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့်ငါ့အဖြေကိုတစ်ခါတစ်ရံနေ့ကိုတဆင့်လာစိတ်တွင်ဘွားမြင်ရပါမည်။